I-china abakhiqizi be-Earth Earth auger | Imishini ye-Dongheng
Isici se-KINGER yethu yomhlaba auger
I-KINGER earth auger inamamodeli angama-25 kusuka ku-YDH mini kuye ku-YDH150000, elungele i-excavator engu-0.8-50ton, i-skid steer ne-backhoe loader njll.
IKHWALITHI ELIPHAKEME KAKHULU HYDRAULIC
Ukusebenza kahle kwe-KINGER kusho ukuthi sinaka kakhulu ukuthuthukisa okunamathiselwe okuthembeke kakhulu kumakhasimende.
Ukucubungula kweGiya kuthatha ubuchwepheshe obukhethekile bokucubungula ukushisa, obakhiwa yiDokotela waseTsinghua University.
Ehlukile ku-KINGER earth auger, i-Non-Dislodgement Shaft iyisigaxa sokushayela esisodwa esihlanganiswe kusuka phezulu phansi futhi sikhiywe ungqimba lomhlaba wokubhola.
Lo mklamo uqinisekisa ukuthi i-shaft ayisoze yawa.Ingenza indawo ephephile yokusebenza kubo bobabili opharetha kanye nanoma yibaphi abasebenzi abazungezile, okuyisici esidingekayo.
Isethi yonke ifaka izingxenye ezi-6 njengoba kukhonjiswa ngezansi:
Sine-pin hitch eyodwa, i-double pin hitch kanye ne-cradle hitch yokuxhuma i-KINGER auger drive nge-excavator / backhoe loader / skid steer njll.
Siphinde senze i-auger drill ne-extension bar ngokwethu.Kunezingu-8mm, 10mm, 12mm no-16mm ukujiya okungafani kwendiza ye-auger ukuhlangabezana namakhasimende asebenzayo izidingo ezihlukile.Ubude obujwayelekile bungu-1.5m.Kodwa futhi sine-1m, 2m no-2.5m ubude. Ububanzi bobubanzi buvela ku-100mmto 2000mm.Singakwazi ukukhiqizwa njengesidingo sakho.
Ngokuphathelene nebha yokwelulwa, kune-1n, 1.5m, 2.5m, 3m ubude obuhlukile obuhlukile obutholakalayo.
Ububanzi be-bar bar ngu-89mm, 108mm, 127mm no-146mm.
Uma kukhulunywa ngamazinyo inketho, sinamazinyo okusika, amazinyo ayindilinga namazinyo ayisicaba esimweni senhlabathi esihlukile.Amazinyo okusika asetshenziselwa ukuzamazama, iphimbo noma umhlaba omningi wamatshe. Amazinyo ayindilinga asetshenziselwa ubumba, umhlaba onesihlabathi, inhlabathi efriziwe noma amatshe amancane.
I-KINGER Earth auger isebenza kakhulu kumandla kagesi, amahlathi, imisebenzi kamasipala yezokuxhumana, ujantshi onejubane, Ukubekwa komhlaba, ukutshala izihlahla, Ukubhaka kahle, izinqwaba zeSisekelo, ukufakwa kwezinqwaba, Amapompo okushisa phansi, Ukufakwa kwePole kanye neMast, Ukufakwa kwamandla eSolar, iBhuloho pier ukubhola njll
I-KINGER earth auger i-A \_ isebenza ezinhlotsheni ezahlukahlukene, ezifana nenhlabathi efriziwe, inhlabathi emsulwa, inhlabathi ethambile, ubumba, isihlabathi, izinsalela zomoya, kanye namatshe, amatshe amancane nokunye.
Okungaphezulu kokucacisiwe kwenzelwe inkomba yakho.Singafanisa imodeli efanelekile ngokuya ngesisindo sakho se-excavator.
Langaphambilini Isixhumi sebhakede
Olandelayo: IMAKHODI EMINI